Bobi Wine oo ku baaqay dibadbaxyo nabadeed | Star FM
Home Caalamka Bobi Wine oo ku baaqay dibadbaxyo nabadeed
Bobi Wine oo ku baaqay dibadbaxyo nabadeed
Musharaxii madaxweynenimo ee dalka Uganda Bobi Wine ayaa shacabka ugu baaqay in ay sameyaan dibadbaxyo nabadeed.
Xilli uu ku sugnaa xarunta dhexe ee xisbiga NUP ee magaalada Kampala ayuu sheegay in dadweynaha laga doonayo in iyagoo aan hubeysnayn ay muujiyaan sida aynan ugu qanacsaneyn maamulka madaxweyne Yoweri Museveni.
Bobi Wine ayaa maamulka Museveni ku dhaliilay mid caburinaya shacabka iyo dadaallada ku aaddan dimuqraadiyadda.
14-kii bishii koowaad ee sanadkan ayay ahayd markii markii 6-aad ee Museveni ku guulaystay xilka madaxtinimo ee Uganda oo uu hoggaaminayay tan iyo sanadkii 1986-dii.
Previous articleDHAGEYSO:Agab lagula tacaalaya COVID-19 oo la gaarsiiyay Garbahaareey
Next article39 ka mid ah saraakiisha dambi baarista oo tababar loo sameynaya
Ugu yaraan toddobo qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay dalka Suudaan oo ay dibadbaxyo ka dhaceen halka 140 kalena la dhaawacay. Wararka ayaa sheegaya...